Kibera : Ireo Vehivavin’ny PowerWomen Manohitra Ny Fitsaràna Ivelany Ny SIDA · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jona 2018 5:12 GMT
Anisany fiarahana miasa amin'ny sehatry ny asa fanaovana gazetin'ny olom-pirenena ity lahatsoratra ity “Asa fanaovana gazety an'ny Olom-pirenena Miaraka amin'ny Map Kibera mandritra ny Fihaonamben'ny GV“.
Tao anatin'ny fandaharanasan'ny Fihaonambe 2012 an'ny Global Voices izay vao avy natao tao Nairobi, tao Kenyà, no nikarakarana ny fitsidihana iray tao Kibera, ilay faritra faharoa mahantra indrindra ao Afrika, miaraka amina mponina heverina ho maherin'ny iray tapitrisa
Kibera, Sary an'i @LauraSchne (CC-By-ND 2.0)
Noraisin'ny tarika Fondation MapKibera Trust tamim-pitiavana ireo mpikambana avy amin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices tonga tao amin'ny biraon'izy ireo nentin'ny fiara fitaterana roa. Naorina tamin'ny taona 2009 ilay Fondation , miasa amin'ny fandrafetana ny sarintanin'i Kibera ho famoahana an'ireo filàna sy ireo loharanon-karena samihafan'ilay vondrom-piarahamonina. Natao ho fitaovana fisoloana vava ihany koa ilay sarintany mba hanasongadinana an'ireo olana lehibe amin'ireo olona ifampiresahana ary mba hanatsaràna ny toe-draharaha iainan'ny vondrom-piarahamonina Kibera.
Ny Kibera ao Nairobia, Kenyà, dia pentina fotsifotsy eo amin'ny sarintany hatramin'ny volana novambra 2009, rehefa noforonin'ireo mponina tanora ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo ny sarintany voalohany nomerika, misokatra sy maimaim-poana .
Ho any Kibera
Taorian'ny fanolorana fohifohy ny MapKibera sy ireo tetikasa nipoirana Voice of Kibera (Feo an'i Kibera) sy Kibera News Network (Tambajotram-baovao an'i Kibera), niditra an-tsehatra izahay niasa. Tao anatin'ireo fifanakalozana niaraka tamin'ny ekipa, nifidy lohahevitra efatra tokony hifantohana ireo mpilatsaka an-tsitrapo an'ny Global Voices: fanabeazana, ireo vehivavy sy ny fahasalamana ara-panahana/SIDA, ny kolontsaina nomerika sy ny fiomanana ho amin'ny fifidianana. Naniry tsara ny hiaraka aminay ny ekipa an'i Kibera tao anatin'ny fitrandrahanay an'ireo lohahevitra ireo sy ireo fandraisana andraikitra mahaliana teo an-toerana. Tena naniry ny hifandray mivantana tamin'ireo olona niasa amin'ny fanetsehana ny fahasalamana ara-pananahana izahay. Izay no antony nampahafantaran'i Lucy, mpitaridia anay, tamin'ireo Power Women.
Lucy, ilay mpitaridia anay. Sary an'i Rezwan (CC-BY)
Iza ireo ‘Power Women'?
Araka ny tenin'izy ireo manokana:
Vondron'ireo vehivavy miisa roapolo ny Powerwomen, izay miray hina mba hampihena ny fahantrana ao anatin'ny vondrom-piarahamonina. Nofidian'izy ireo ny anarana hoe “power”, izay midika hoe hery. “nguru” dia teny swahili midika hoe fahefana. Iray amin'ireo antony niraisana hina ny mba hampihenana ny fitsaràna ivelany any anaty vondrom-piarahamonina.
Vondron'ireo Power Women. Sary tao amin'ny tranonkalan-dry zareo.
Noraisin'izy ireo tao amin'ny trano fivarotan'ny Power Women izahay. Teo ampidirana, nifankahita tamin'i Elizabeth (filohan'ny vondrona) sy Rosemary (mpitàmbola) izahay. Efa tany amin'ny taona 2004 ny tantaran'izy ireo, rehefa nifanome tànana ireo vehivavy mitondra ny tsimokaretina misedra ny fanavakavahana mba hitady fomba hivoahana amin'izany. Notantarainy taminay ny tantarany mahafinaritra.
Tamin'ny voalohany, nametraka vola 10 shillings keniana (KSH) tsirairay avy ireo vehivavy isaky ny fivoriana. Fivoriana izay atao indroa isankerinandro, vetivety no nahangonan'ny vondrona ny vola 3 000 KSH ary afaka nanomboka nanamboatra an'ireo bokotra kely fanao an-tratra VIH/SIDA izy ireo. Nanomboka nivoaka tao anaty vondrom-piarahamonina izy ireo ary mizara maimaimpoana an'ireny bokotra kely ireny mba hanentanana momba ny VIH/SIDA sy hamakiana ny fahanginana ary ny fitsràna ivelany manodidina ilay aretina. Avy eo nanan-kevitra izy ireo ny mba hanaovana ny asa ho maharitra tamin'ny alalan'ny fanombohana ny orinasan'izy ireo manokana: ny Trano Fivarotan'ireo Power Women. Amidin'ireo vehivavy ireo ao ny asatanana toy ny firavaka vita amin'ny perles sy tandroka omby, ary koa ireo harona vita avy amin'ireo akora efa niasa fa naverina nampiasaina indray.
Asatanana vitan'ireo vondrona Power Women. Sary an'ny tranonkalan'izy ireo
Nanangana fikambanana iray ny vondrona Power Women ary natambany izay vola azon'izy ireo mifamatotra betsaka tamin'ny fitadiavany isanandro. Koa satria ny ankamaroan'ireo vehivavy ireo dia manana asa hafa, mifampizara izy ireo momba ny anjara fitantànana ny fivarotana, araka izay fotoana maha-afaka azy, mba tsy ho tapaka olona roa isan'andro ao amin'ny fivarotana.
Zaraina efatra ny vola miditra ao amin'ny fivarotana isambolana. Ny ampahany voalohany natokana ho amin'ny fahazoana an'ireo akora fototra ilaina amin'ny fanamboarana ireo vokatra ho amidiny. Ny ampahany faharoa natokana ho amin'ny sakafon'ireo vehivavy miandraikitra ny fivarotana mandritra ny fotoana maha-ao azy. Satria tena marefo tokoa ireo mitondra ny tsimokaretina, ny ampahany faha-telo dia natao ho amin'ny vonjy voina rehefa tena henjana ny fahasalaman'ny iray amin'ireo vehivavy ireo. Ny ampahany faha-efatra kosa dia natokana ho karaman'ireo vehivavy miasa ho an'ny trano fivarotana.
Inona no novàn'ny Power Women tao Kibera?
Milaza ireo vehivavy fa manao fanamby amin'ireo fitsaràna ivelany eo amin'ny fiainana miaraka amin'ny VIH/SIDA ao anaty vondrom-piarahamonina. Avy amin'ny alalan'ny ohatra velona niainan'izy ireo sy ny faharetany, nanomboka nivoatra ireo fahazarana tsy nahomby: betsaka ireo olona no vonona ny hifandray amin'izy ireo ary nahazo vaovao tsara kokoa mikasika ny VIH/SIDA.
Nilaza i Elizabeth fa efa mihabetsaka ireo olona no nanao fitiliana ary nahazo vaovao mikasika ny fahasalamany ara-pananahana. Torak'izay koa, nahafahan'ireo vehivavy ao amin'ny vondrona nikarakaràna an'ireo zaza kamboty ny vola azo tao amin'ny trano fivarotana. Matetika izy ireny dia salama tsara no nilaozan'ny fianakaviana, rehefa matin'ny SIDA ireo ray amandreniny. Marobe ireo mponina ao Kibera no manatona an'ireo Power Women mba hila fanampiana sy torohevitra momba ireo olana atrehan'izy ireo isanandro, noho ny fahitàna ny ohatry ny faharetana mivaingana izay nomen'izy ireo.
Na izany aza, tsy ilaozan'ireo olana atrehina hatrany ireo vehivavy, izay ny iray amin'izy ireny dia ny fanoherana indrindra indrindra ataon'ireo lehilahy ao anaty fiarahamonina, tsy mety handray andraikitra amin'ny resaka VIH/SIDA. Na eo aza ireo vato misakana, vonona ny hanohy hatrany ireo ezaka ataony ireo vehivavy mba hiadiana amin'ny fanilikilihana. Novelabelariny tamin'ny antsipirihany taminay ireo tetikasan'izy ireo mba hanitarana ny asany sy mba handraisana vehivavy betsaka ho ao anaty vondrona. Ny fahavononan'ireo Power Women hanaparitaka ny hafatr'izy ireo no fanehoana tsara indrindra mandika ny anarana iantsoana azy ireo.
Raha liana te hanampy ny vondrona Power Women ianao dia afaka mandefa fanampiana amin'ny kaonty amin'ny banky eo ambany:
Tatitra nataon'i Ahmed Awadalla sy Rayna St